Indonesia in Focus: Ny fifohana sigara dia mamono olona an-tapitrisany
Ny fifohana sigara dia mamono olona an-tapitrisany
Tsy vita Journey (380)
(Fizarana valo-polo amby telon-jato), Depok, West Java, Indonezia, Oktobra 13, 2015, 8:37 pm)
Text-dalana Metro TV 10 Novambra 2015, ary nilaza fa tamin'ny 2030 nisy Sinoa roa tapitrisa isan-taona, izay maty noho ny fifohana sigara fahazarana (tsigara). Mandritra izany fotoana izany-pirenena Indoneziana fahitalavi-panjakana tsy miankina dia izao ambarao Ministeran'ny Fahasalamana Indonezia mampiseho misy fahafatesana kokoa avy amin'ny tenda homamiadan'ny nahatonga tia ny fifohana sigara, sy mba hampahatsiahy ny vahoaka mba tsy ho ny manaraka niharam-boina.
Ny olana ny sigara, ka mahatonga olana ara-pahasalamana ho an'ny olona ankehitriny lasa maneran-olana, fa tsy hoe misy olana amin'ny matevina mponina toa an'i Shina, Indonezia, India, ary maro tany mahantra eo amin'izao tontolo izao toy ny Bangladesh, fa namely firenena mandroso any Eoropa sy ny faritra hafa ao amin'ny kaontinanta, hanenjanana kokoa ny fitsipika ao an-toerana, ka firenena maro no voarara dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sigara toy ny fahitalavitra, no hamaly izay manjo lisitra ara-pahasalamana vokatry ny fifohana sigara eo amin'ny fonosana sigara, ary koa ny fandrakofana merperluas tsy fifohana sigara faritra, toy ny eo amin'ny fitateram-bahoaka, ireo toeram-bahoaka. Na izany aza, ny isan'ny paraky andevon'ny mitombo sy ny isan'ny maty vokatry ny sigara nitombo ihany koa ny fifohana sigara. Tsy vitan'ny hoe ny governemanta sy ny mpikambana ao amin'ny parlemanta mba ho lalàna mba tery ny toerana ho amin'ny fampandrosoana ny paraky orinasa, fa koa ny mpitondra fivavahana no namoaka fatwa (ara-pivavahana ny lalàna), toy ny Muhammadiyah any Indonezia mifototra amin'ny naroso Al Quran sy ny Sounna sy ara-tsiansa porofo mba hamoaka ny fatwa izay ny fifohana sigara dia haraam. Toy izany koa dia naneho toe-tsaina ihany koa fa ny manam-pahaizana malaza ao Arabia Saodita, Ejipta, Pakistan sy ny manam-pahaizana maro hafa. Na dia misy mpihaino ny Radio sy ny Televiziona Rodja mangataka fa manao tauziahnya Ustad (Dinika) izy rehetra namaly smoking Haram mifototra amin'ny naroso Al Quran, Sounna sy ny manam-pahaizana fa hifehy. Ustad Abu Yahya Badrussalam, Lk, manam-pahaizana hadita (fomban-drazana) nahazo diplaoma oniversite Islam in Madinah, Arabia Saodita ny fifohana sigara no haraam melontakkan. Araka ny heviny, mifototra amin'ny ny tohan-kevitra avy amin'ny CORAN sy ny Sounna, ary ny porofo ara-tsiansa ny fifohana sigara eo amin'ny sokajy ny famonoan-tena, satria manimba ny fahasalamana ny mpifoka sigara, izay mety hiteraka fahafatesana moramora. Izany no antony, hoy Abu Yahya, nifoka sigara ao amin'ny sokajy ny asa ny tsy fankatoavana, dia ny mba tsy hampihilangilana vato fahotana ao amin'ny any ankoatra. Aho empirical zavatra, manana namana aho, no koa matetika vavaka amin'ny trano fivavahana iray, ary rehefa afaka ny vavaka rehefa mandeha an-trano, dia nilaza tamiko, fa hatramin'ny kely aho dia tia ny mifoka sigara. Araka ny taona ny fisotroan-dronono efa indroa Mr. Bypass fo fandidiana, dia nijaly aretim-po noho ny fifohana sigara dia taona vitsivitsy lasa izay dia fifanarahana atidoha homamiadana ary tokony ho niasa tao amin'ny atidohany, ka efa Naharitra volana maromaro, ao amin'ny dingana faharoa atidoha homamiadan'ny fandidiana ny ainy tsy ho voavonjy. Zandriko lahy isa dimy (avy tamin'ny 10 mpiray tam-po) Bambang Widodo maty tamin'ny 2006, rehefa voan'ny homamiadan'ny havokavoka tsaboina ao amin'ny hopitaly Pasar Rebo. Jakarta Timur, dia junkie lanja
ny fifohana sigara.
Ao amin'ny Sina 2030 3,5 tapitrisa / Taona Maty Sigara Amin'izao fotoana izao any Shina, tokony ho 1,2 tapitrisa ny olona maty isan-taona noho ny zavatra mifandray amin'ny fifohana sigara efa ho 9.500 isan-taona ny olona maty noho ny fahalotoan'ny rivotra tao London Hidayatullah.com-A tatitra vaovao dia maminavina fa ny fifohana sigara dia mamono olona 3,5 tapitrisa isan-taona ao Shina tao anatin'ny roapolo taona. Ny tatitra dia atao amin'ny Sinoa sy ny manam-pahaizana iraisam-pirenena, ary nafahana alakamisy, andro vitsy mialoha ny daty napetraky ny World Fahasalamana Fikambanana for Shina mba handrara an-trano ny fifohana sigara amin'ny toeram-bahoaka. Tsy azo heverina ho Shina hitsena ny daty ny Alahady, iray amin'ireo toe-javatra maro i Chine napetraky rehefa nanaiky ho mpikambana ao amin'ny OMS dimy taona lasa izay. Forecast ho an'ny 2030 dia oharina amin'ny isa amin'izao fotoana izao izay tokony ho 1,2 tapitrisa ny olona maty isan-taona noho ny zavatra mifandray amin'ny fifohana sigara. Ny tatitra dia milaza fa tamin'ny 2030, ny fifohana sigara dia mahatonga ny 25 isan-jaton'ny maty rehetra, raha oharina amin'ny teo anelanelan'ny 2 sy 3 isan-jato, izay matin'ny SIDA. [Voan / hidayatullah.com] an'arivony maty tany Indonezia sigara REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta - Ireo mpikambana ao amin'ny Fanaraha-maso Ad Hendriyani nifoka sigara manodidina ny sekoly, nanao hoe: tokony ho 200 arivo sy iray alina ny olona any Indonezia maty ny aretina vokatry ny fifohana sigara. Hendriyani nanao hoe: Indonezia no firenena fahatelo avo indrindra ny mpanao isan'ny mpifoka sigara eto amin'izao tontolo izao. Voalaza fa 66 tapitrisa misy mazoto mpifoka sigara any Indonezia, ary 3.9 tapitrisa amin'izy ireo no zanaka taona 10 ka hatramin'ny 14 taona. Ny isan-jaton'ny lehilahy mpifoka sigara dia 67.4 isan-jato. Noho ny mpifoka sigara ao amin'ny firenena dia ny avo isan'ny mpifoka sigara izay namono am-polony. "Isan-taona dia tokony ho 200 arivo sy iray alina ny olona any Indonezia maty ny aretina vokatry ny fifohana sigara," hoy izy nandritra ny Conference Press sy ny fivelarana Fanaraha-maso Cigarette Ads Around sekoly tamin'ny tanàna dimy, any Jakarta, Alatsinainy (15/6). Mahatsikaiky, ny fielezan'ny fifohana sigara any Indonezia no avo indrindra any Azia Atsimo Atsinanana. Salanisan'ny olona hahatratra hatrany amin'ny 12,4 Indonezia setroka sigara isan'andro. Mandritra izany fotoana izany, ny Indoneziana fanala Lisda Ankizy nanangona rakitra Sundari ny OMS Fikambanana Firenena Mikambana Fikambanana (OMS) milaza fa ny fampiasana ny paraky sy ny sigara 100 tapitrisa ny olona maty tamin'ny taonjato faha-20. Raha mitohy izao fironana fihinanana, sigara dia mamono olona arivo tapitrisa tamin'ny taonjato faha-21 dia ho avy amin'ny 80 isan-jato ny fahafatesana tonga any am-dalam-pandrosoana. WASHINGTON, (AFP) .- Ny paraky indostrian'ny mba US $ 7000 ho an'ny tsirairay avy mihoatra ny enina tapitrisa ny olona maty isan-taona avy amin'ny aretina mifandray amin'ny sigara, araka ny fahasalamana vondrona mpisolovava World Lung Foundation (WLF). Tamin'ny taon-dasa, mihoatra ny 5.8 tapitrisa tapitrisa sigara nandevona, mitovy amin'ny 2013, noho ny fitomboan'ny fampiasana paraky any Shina ny hanalà ny fihenan'ny any amin'ireo firenena hafa, araka ny tatitra tarihin'ny WLF. Ao amin'ny tatitra maneran-tany Paraky Atlas, ny WLF sy ny Amerikana Cancer Society milaza fa tamin'ny 2013, ny taona farany tamin'ny misy angon-drakitra, tombony ny paraky indostria nahatratra mihoatra ny $ 44 lavitrisa. Mandritra izany fotoana izany, 6,3 tapitrisa ny olona matin'ny aretina mifandray amin'ny sigara, mitovy amin'ny misy tombony ny $ 7.000 isaky ny fahafatesana vokatry ny sigara. Milaza ny tatitra fa raha mitohy amin'izao fotoana izao fironana, iray lavitrisa ny olona ho faty noho ny fifohana sigara sy ny hatsiaka amin'ny sigara taonjato io. Ankoatra ny havokavoka mahatonga homamiadana, izay matetika no mahafaty, fampiasana sigara no mitarika antony mety ho maromaro ny aretina hafa. Izany no antony lehibe indrindra izay tena tsy azo ihodivirana eo amin'izao tontolo izao ny fahafatesana aloha loatra avy amin'ny mitaiza fepetra, toy ny aretim-po, fahatapahan'ny lalan-dra sy ny tosidra ambony. Maro ny firenena manerana izao tontolo izao no natomboka manohitra ny paraky lalàna, na izany aza Paraky Atlas nahita fa ihany no 10 isan-jaton'ny izao tontolo izao mponina izay ahitana feno fandraràna ny dokam-barotra, fampahafantarana sy ny fiahiana amin'ny paraky, ary afa-tsy 16 isan-jato ny voatokana tsy fifohana sigara mandritra. (VOA) Fantaro ny sitrapony sy ny famindram-po ny mpifoka sigara, satria mety hahatonga pencandunya fifohana sigara dia hijaly na eto amin'ity tontolo ity sy any amin'ny fiainana aorian'ny fahafatesana?
Shina Mampitandrina antsika ny South China Ranomasina
Oktobra 9, 2015
SelatanImage Ranomasina China copyrightReuters
Nanavotra nosy ao amin'ny South China-dranomasina ho toy ny loharanom-paritra fifanenjanana.
Shina Nampitandrina ny Etazonia tamin'ny Zoma, Oktobra 9, mba tsambo akaiky kokoa ny nosy any amin'ny South China Ranomasina izay milaza zo hitondra.
Haino aman-jery isan-karazany dia nitatitra fa ny US Navy no mieritreritra ny miisa sambo Toerana Fanamboarana nosy any amin'ny Ranomasina Shina Atsimo.
Ny sambo dia voalahatra ny hiditra ny faritanin'i 12 dranomasina kilaometatra nilaza ny Beijing toy ny amin'ny fari-dranomasin'i.
Ho valin'ny fanomanana ity, ny vahiny ao Beijing fanompoana mpitondra tenin'ny nilaza fa tsy namela misy firenena mba handrava ny alalan 'ny fari-dranomasin'i.
Masoivohom-baovao Reuters, ny asa fanompoana mpitondra teny hoe: "izahay antoko rehetra voakasika mampahatsiahy tsy mba handray fepetra feno fihantsiana sy amin-kitsimpo maka faritra manoloana ny toe-tsaina tompon'andraikitra fandriampahalemana sy fitoniana."
Ny Etazonia sy ny mpiara-dia aminy, anisan'izany Japana, efa niantso ny Beijing mba hampitsahatra fananganana ny solon-nosy ao amin'ny South China Ranomasina, izay no tena olana eo amin'ny fiakaran'ny fifanolanana eo amin'ny Beijing sy Washington fanjakana.
Na dia ny Filoha Xi Jinping hoe tsy misy mieritreritra ny famatsiana fitaovam-piadiana ny nosy, ny mpandalina amin'ny Washington sy Etazonia i Shina hoy ny manam-pahefana miaramila nanorina trano teo.
Manizingizina Beijing zo ao amin'ny South China Ranomasina famerenana
Mirehitra Coral Island CrossImage copyrightReuters CSIS AMTI
Shina mba hanorina fiaingana fahatelo amin'ny Nosy Reef Misy Afo Mirehitra Cross, any amin'ny Ranomasina Shina Atsimo.
Ny governemanta Shinoa namerina ny zo hitaky ny niady hevitra faritra ao amin'ny South China Ranomasina.
Minisitry ny Raharaham-bahiny Shinoa Wang Yi, hoy ny tetikasa Zava-dehibe ny hanohy, na dia teo aza Beijing tamin'ny volana lasa izay no nitsahatra famerenana.
"Ireo tetikasa manan-danja isika miasa eo amin 'ny nosy any amin'ny Ranomasina Shina Atsimo. Tsy nanao izahay na firenen-kafa toy ny tanjona", hoy i Wang Yi.
"Izy ireo dia natao mba hanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ny miaramila nametraka tao ary koa ny fanatanterahana ny andraikitra ho toy ny firenena lehibe indrindra ao amin'ny faritra," hoy izy nanampy.
Zanabolana nampiseho sary nalaina vao haingana mpanao fanorenana fananganana ny fiaingana fahatelo amin'ny Cross Misy Afo Mirehitra Reef Island Reef.
Amin'ny fotoana vao haingana ny Sinoa manam-pahefana mba hanorina trano runways sy ny fifandraisana eo amin'ny nosy any amin'ny South China Ranomasina, izay mino dia ampiasain'ny miaramila Shinoa.
Filohan'ny Shina, Xi Jinping, dia hamangy ny Etazonia herinandro manaraka sy ny Sinoa fanambarana ao amin'ny South China Ranomasina no mety hodinihina rehefa nihaona tamin'ny manam-pahefana ambony ao Washington.